Qarax gaari oo aan khasaare geysan oo ka dhacay degmada Cabdilcaziiz ee Mudisho – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Qarax gaari oo aan khasaare geysan oo ka dhacay degmada Cabdilcaziiz ee Mudisho
17th February 2014 A warsame Af Soomaali 0
Muqdisho – Mareeg.com: Qarax lagu xiray gaari oo la dhigay agagaarka kawaanka Hilibka ee degmada C/casiis ayaa barqadii maanta ka dhacay degmadaas.
Gudoomiyaha degmada C/casiis C/llaahi Xuseen Xasan “Fanax” ayaa sheegay in qaraxaasi lagu soo xiray gaari yar, wuxuuna intaasi ku daray in la qabtay ninkii watay gaarigaasi oo isagu taagnaa meel aan sidaa uga fogeyn gaariga.
Guddoomiyaha ayaa xusay in qaraxu uu ka kacay kursiga darawalka, iyadoo gaariga uusan soo gaarin burbur xoog leh, wuxuuna intaa raaciyay in wadihii gaarigaasi ay qabteen booliiska islamarkaana oo su’aalo weydiinaya.
Ma jirto cid wax ku noqotay qaraxaasi sida uu noo xaqiijiyay gudoomiyaha degmada C/casiis, inkastoo qaraxani u ekaa mid loogu talagalay in lagu qaarijiyo wadaha gaariga oo la sheegay in uu dhawaan ka yimid dalka dibaddiisa.
Gudoomiyaha Baarlamanka Soomaaliya oo gaaray dalka Iran oo lagu qabanayo shirka OIC
How Farah Dhagjuun from Adaado became Faqey sidi from Shangani city